चुनाबी अभियान शुरु गरेका बाबुरामलाई कति सहज होला नारायण काजीसँग ? - Everest Dainik - News from Nepal
चुनाबी अभियान शुरु गरेका बाबुरामलाई कति सहज होला नारायण काजीसँग ?
गोरखा, असोज ७ । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमागोरखा क्षेत्र नम्वर २ बाट चुनाव लड्ने भएपछि । उक्त क्षेत्रमा चुनावी अभियान शुरु गरेका छन ।
शुक्रबारदेखि भट्टराई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिदै र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्दै चुनाव अभियानमा सक्रिय भएका हुन ।
याे पनि पढ्नुस गोरखाको सोह्र किलोमा बस दुर्घटना, १७ जना घाइते
भट्टराईले प्रनिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारमा चुनाबी अभियानका लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन ।
भट्टराईले अभियानका क्रममा मतदातासँग भने, ‘जनताको सेवा वाहेक कुनै लक्ष्य राखिन । म अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा विकासको आधारभूत पुर्वाधार निर्माण गरेको छु, अव त्यसलाई पूर्णता दिन एकचोटी अवसर दिनुस् ।’
याे पनि पढ्नुस चिठ्ठा थुतेर घर लिए लाप्राकका भूकम्पपीडितले
समग्र गोरखा जिल्लाको प्रनितिधित्व हुन्छ भनेर क्षेत्र नम्वर २ बाट चुनाव लड्न लागेको भट्टराईले दावी गरे । उनले मतदातासँग आफू अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको सकरात्मक कामको आधारमा मत माग्ने भट्टराईले स्पष्ट पारे ।
छोटो अवधिमा आर्थिक क्रान्ति गर्नका लागि संविधान कार्यान्वयन पनि भइरहेको उनको भनाइ छ । आसन्न चुनवामा देशभर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार उठाउने भट्टराईले बताए ।
याे पनि पढ्नुस भाइरल ज्वरोले गोरखामा एकको मृत्यु, दुईसय भन्दाबढी बिरामी